Torolalana ho an'ny Travel North Packages India Atsinanana | Antsoy ny + 91-993.702.7574
Ny faritra tsy dia fantatra loatra, ny tany mistery any avaratra-atsinanana dia tsy azo inoana fa toerana mystika hitsidika. Tena marina ny lanitra! Ny Travel Packages amin'ny North India India dia natao manokana ho anareo mba hijery ity tany miafina ity.
Nipongatra tany an-tendrombohitra tsy nisy pentina sy lohasahan'i Himalayas, any avaratra atsinanan'i Inde ny fanadihadiana faran'izay ambany indrindra, ny hafainganam-pandehan'ny sehatra ary ny fisehoana anelanelan'ny toerana mahafinaritra indrindra any Inde. Ity ampahany amin'ny firenena ity dia trano fonenana fanta-daza antsoina hoe 'Seven Sisters' Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland ary Tripura. Ny hatsaran-tarehy hafa tsy manam-pahaizana ao amin'ny tendrony ambony Sikkim. Ny Gangtok mahavariana dia manamboatra mpandeha maro isan-taona, ary fitsidihana tsy azo antoka ny fitsidihana na inona na inona indray mandeha eo amin'ny fiainanao.
Mifamatotra amin'ny sisin-tanin'i India amin'ny alàlan'ny tery tery tery, ity tara-pahavitrihim-pitantanana lavitra any amin'ny faritra be tendrombohitra sy monastera bodista ity dia mahasarika haingana ny fisainan'ny Indianina sy vahiny.
Kôlônaly sy ara-jeografika, ny firenena avaratr'i Inde dia miavaka amin'ny firenena hafa ary miharihary amin'ny fomba fiainan'ny firenena izany. Ny hafanana avy any amin'ny Blue Mountains, ny ala mikitroka, ny ala mikitroka, ny karazan-java-manan'aina, ny kolotsaina velona ary ny asa tanana dia hamela anao ho fahatsiarovana tsy hay hadinoina.
Ny sasany amin'ireo toerana azonao alamina ny dianao dia Darjeeling, Kalimpong, Gangtok, Lachung, Kanchenjunga Peak, Yumthang Valley, Shillong, Pelling, Cherrapunjee, Park National Park Kaziranga, Guwahati etc. Jereo ny sasantsasany amin'ireo India Travel Packages eto ambany ary alaharo ny dian'izy ireo!
Toeram-piantsonan'ny havoanan'i North East India